July Dream: Shame on you
Posted by JulyDream at 7:39 PM
ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ မြင်ရကြားရတာတွေ.. စိတ်ကုန်စရာကောင်းလွန်းလို့ ဇာတ်ထဲကလို့ အမယ်မင်း ဆိုပြီး အော်သာငိုလိုက်ချင်တယ်.. ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေ .. ကောင်မလေးတွေရော ကောင်လေးတွေပါ မထစတမ်း ကျူနေကြတာ နားရှက်လာလွန်းလို့ ထတောင်ပြေးရတဲ့ အထိ.. သူတို့ကတော့ ဘာမှ မဟုတ်သလိုပဲ..
အင်တာနက်ဆိုတာ ကျူဖို့ ဖွန်ကြောင် ဘဲကြောင်ဖို့ သက်သက်ကြီးလို့ ထင်နေကြတဲ့ လူငယ်တချို့ အတွက် ရင်လေးမိတယ်.. အန္တရယ်တွေကိုလည်း သူတို့ တွေးမိကြရဲ့လား စိတ်ပူစရာပဲ .. အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး ပညာရှာ ဘဝတိုးတက်လမ်းရှာလို့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိသုံးကြရင် နိုင်ငံအတွက်လည်း တစ်နည်းတစ်ဖုံ အကျိုးရှိလာစေမှာ....
လူငယ် တစ်ချို့တင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး .. ၂၀ ကျော် ၃၀ နားနည်း လူကြီးပေါက်စတွေကလည်း.. ထိုနည်းလည်းကောင်း တွေ့ရတော့ .. အင်း .. ကိုဂျူလိုင်ရေ.. ဗိုလ်ချုပ်ပြော သလို ... ### ဖြစ်ကုန်ကြတော့မှာပဲ.... ဟင်းးးးးးးးးးးး
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေပေါ့ ကိုဂျုလိုင်. ကံအဆင်မသင့်လို့ခံလိုက်ရတယ်ဘဲထင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီလိုမျိူးတွေတော့မဖြစ်သင့်ဘူး။
စိတ်လျော့ပါဗျာ။ ကမ္ဘာတလွှားမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာပဲဗျ။ မြန်မာပြည်လို ရှားရှားပါးပါးအင်တာနက်လေးသုံးခွင့်ရတဲ့ နေရာမှာ အဖိုးတန်အချိန်တွေ ငွေတွေ အလဟသသုံးပစ်နေတာ တွေ့ရတာတော့ ၀မ်းနည်းစရာပေါ့။ ဂျီတော့မှာ အာနိုးပုံတင်ထားလိုက်ပါလား။ ဒါမှမဟုတ် ဂျီတော့နာမည်ပြောင်းထားလိုက်လေ။ ဥပမာ july dream the straight ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။ :)
ကျွန်တော်က ဂျီတော့ခ်မှာ အဲဒါမျိုးတွေ ကြုံပေါင်း မနည်းတော့ဘူး။ အဓိက တရားခံကတော့ Forward Mail တွေပဲလေ။ နောက်တစ်ခုက ဂျီတော့ခ် လူကုန်ကူးခြင်း ခံရတာပါပဲ။ လှတပတ အကောင့်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းတာမျိုးပေါ့။
တွေ့သမျှ လူကို လက်မခံနဲ့လေ ဆိုပေမယ့်...
ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိပဲနဲ့ Reject မလုပ်ချင်ဘူး။ တချို့တွေက သွေးလှူဖို့ သိချင်တာတွေ ရှိလို့ လာချိတ်ဆက်တာမျိုး ရှိတတ်တယ်လေ။
ကံအကြောင်းမလှလို့ ဆိုပြီး ကံကိုတော့ ရိုးမယ် မဖွဲ့ချင်ပါဘူးဗျာ။
ကိုယ့်ဆီမှာတော့မသိရင်denyပဲ၊တူ တူမတွေတောင်denyလုပ်မိတယ်..အချင်းချင်းတောင်နဲနဲရိုင်းရင်remove and blockပဲ၊ကြီးကျယ်တယ်ထင်ထင်...
ူlife is short
သမဝါယမပစ္စည်း ထုတ်သလိုသာ သဘောထားပါလေ။ လိုချင်တာနဲ့ မလိုချင်တာကို တွဲယူရတာပ။ သွေးအလှူကို လက်ခံဖို့ ရှိနေမှတော့ ကိုယ့်ဆီက ပြန်အလှူခံတာလေးတွေကိုလည်း အလိမ္မာနည်းလေးနဲ့ ကြည့်ရှောင်ပေါ့ကွယ်။
အကြံပေးလိုတာကတော့ သွေးလှူဖို့ကိစ္စအတွက် ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု သီးသန့်ယူလိုက်တာ ကောင်းမည်ပ။ ဆိုလိုတာက အကောင့်နာမည်မြင်တာနဲ့ သွေးအလှူရှင်တွေသာ ဆက်သွယ်ချင်ဖွယ်ရှိတဲ့ အမည်မျိုးသာပ။
သို့ဂလို သိသာလျက်ကယ်နဲ့ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဆက်ခါ ဟလာတော့လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တက်တာ ပြလိုက်ပေပ။
ဂျူလိုင်အိပ်မက်ဆိုတဲ့ အီးမေးလ် နာမည်လေးက ကဗျာဆန်တော့ တဏှာကြံ ခံရတာ မဆန်းပေဘု အမောင်ငယ်။
အတစ ပို့စ်မှာ အတစ စာမူခ တော့ မဟုတ်ပါဘု
ရသမျှ အကြံဥာဏ် အပြီးပေးခဲ့ပါရဲ့
အမြန်ဆန် အီးမေးလ် အခုလုပ်................
ကိုဂျူလိုင် ပေါက်ကွဲတာကို နားလည်တယ်..
ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာကောင်းတာက ကိုယ်တွေက အဲဒီအောက်တန်းစားတိုင်းပြည်ကဖြစ်နေတာပဲ..။ ဟုတ်တယ်.. တကယ် ရှက်တယ်..။ သေပစ်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ရှက်စရာကောင်းတဲ့ သမိုင်းကို အထပ်ထပ် အရေးခံနေရတာ.. နာလှတယ်။
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ကိုဂျူလှိုင်ရေ
အပေါ်က မိတ်ဆွေတွေ ပြောသလိုပေါ့။
နောက်ပြီး အီးမေးပို့ လိမ်ါမယ်ပေါ့။
တစ်ခါထဲ ဂျီတော့မှာ မေးမှ ပြောမှလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။
အောက်တန်းစားထဲ ကိုယ်မပါအောင် သတိထားရအုန်းမယ်။ ဟေဟေဟေ။
ပေးတဲ့ Message အားလုံးကို ရလိုက်တယ်။ ကိုဂျူလိုင်ပို့စ်လေးက သိပ်ကို အနှစ်သာရရှိပါတယ်။ အပေါ်က အတော်များများ အကြံပေးကြတဲ့အတိုင်းပဲ သီးသန့် Account လေး ဖွင့်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ် တခုမှ မလုပ်ထားပဲ Profile ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်ဖြစ်သွားတာ ကိုဂျူလိုင် ခံရသလောက် မဟုတ်ပေမယ့် ငယ်ငယ်ချောချော ပညာတတ် ဆရာဝန် မလေးတယောက် အထင်ကြီးခံရပြီး မိတ်ဆွေအတုတွေက လာမိတ်ဖွဲ့တာ ကြုံရ၊ အမှန်တိုင်း ပြောပြလိုက်တော့ စွန့်ပစ်သွားကြတဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံရလွန်းလို့ အခုတော့ Profile မှာ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းရော အခုလက်ရှိခံယူချက်ရော အကုန်ထည့်ထားလိုက်တော့ မိတ်ဆွေအတုတွေ မလာတော့ဘူး။ ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ အရင်က မသိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း တကယ်မိတ်ဆွေအစစ်တွေပဲ လာတော့တယ်။ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ လတ်လျားလျတ်လျားနဲ့ ဖွန်ကြောင်ချင်သူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေအတုတွေရဲ့ အန္တရယ်မရှိတော့ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် အောက်တန်းစား ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေက အမြန်ဆုံး လွတ်မြှောက်ပါစေ။
ကို ကလူသစ်ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ ဒါက မြန်မာမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာပါ ဖြစ်ပျက်နေတာပါ။ Gmail မဟုတ်တဲ့ တခြားမေးလ်တွေ သုံးရင် အရမ်းကို သိသာပါတယ်။ အခုဆို VZO က အရမ်းကို Freedom ဖြစ်လွန်းတာကလည်း ပြဿနာပါ။ Accept မလုပ်ပဲနဲ့ Video chat call ခေါ်လို့ရပါတယ်။ မတော်လို့များ မကိုင်မိလိုက်နဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးပုံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါတွေက ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ မြန်မာပြည်က အခုမှ ရောဂါ ကူးလာတာပါ။ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းက လူငယ်တွေကိုသာ မဖြစ်အောင် ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြပါစို့ဗျာ။
Gtalk မှာ ကိုယ့်ကို လာပြောတာ ခံရရုံးလေးနဲ့တော့
၀ါးလုံးသိမ်း ရမ်းလိုက်တာ မကောင်းဘူး ထင်ပါရဲ့..
ပြီးတော့ မမေငြိမ်း ရဲ့ comment အတွက် တကယ်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်..
မြန်မာပြည်က လူ ဖြစ်ရတာရှက်တယ်လို့ ပြောတဲ့ အတွက်ပါ..
ကျမလေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာမ တယောက် ဘယ်နိုင်ငံသူ ဖြစ်ချင်ပါလိမ့်လို့ လဲ တွေးနေမိပါတယ်..
ကျမတို့တွေ ကိုယ်နိုငရာတာဝန်တွေကို ကိုယ်စီထမ်းနေကြတယ်..
သမိုင်းအပြောင်းအလဲ မရနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေတခုမှာ ရှိနေလို့သာ ကျမတို့ အဝေးမှာ ရှိနေကြရတာ..
ဒီနိုငငံသား ဖြစ်ရတာ ရှက်တယ်ဆို.. ဘာမှ လုပ်ခွင့်မရှိပဲ လည်စင်းခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ ဘယ်သူ့ သွားအားကိုးရပါ့မလဲ လို့ လဲ တွေးမိပါရဲ့...
မောင်လေးဂျူလိုင်ရေ..၈ျီတော့ခ်မှာ နှောက်ယှက်ခံရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး..
ဒါပေမဲ့.. အပေါ်က comment အတွက် ပို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့
”သူတို့ဘက်က ကြည့်ရင် လက်ဖမိုး တခြားသူဘက်က ကြည့်ရင် လက်ဖ၀ါးဆိုသလိုမျိုး။ အဲဒါကို သူတို့လို လက်ဖမိုးလို့ မြင်တာမျိုးမှ အမှန်ပါ။ တခြားသူ မြင်တဲ့ လက်ဖ၀ါးဆိုတာ အမှားကြီးပါဆိုတာ လိမ့်အော်တတ်တဲ့သူမျိုးပေါ့။ သူတို့နဲ့ အမြင်မတူရင် ရန်သူဆိုပြီး နှုတ်သီးကောင်း လျှာပါး နှိပ်ကွပ်တတ်တဲ့ ပညာတတ် အောက်တန်းစားထဲမှာ ဆရာဝန်တွေလည်း အင်ဂျင်နီယာတွေ ပါသလို ပီအိတ်ခ်ျဒီ ဒေါက်တာဘွဲ့ရကြီးတွေလည်း ပါတယ်။”
လို့ ကိုဂျူလိုင် ပြောတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ နည်းနည်း ဆွေးနွေးချင်တယ်။ ဒါကိုကျွန်မ သိပ်လက်ခံတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရသမားတွေဟာ ကျောင်းသားဘ၀မှာ Case တခုရဲ့ Resulotion အတွက် ရှုဒေါင့်အမျိုးမျိုးက ဆွေးနွေးရတာ၊ အဲဒီအားလုံးထဲမှ နောက်ဆုံးကိုယ်က option တခုကိုပဲ ရွေးရပြီး ဘာကြောင့် ဒါကို ရွေးရတယ်တဲ့ အားသာချက်ကို တခြား option တွေထက် ပိုသာအောင် ပြန်ဆွေးနွေးပေးရတာ စတဲ့ Critical thinking နဲ့ လုပ်ရတဲ့ Assignment တွေ၊ စာတမ်းတွေ၊ class tutorial ဒါမှမဟုတ် online tutorial တွေ လုပ်ခဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ မထင်ဘူး။ ရှိခဲ့ရင်တောင်မှ ဘက်ပေါင်းစုံမဟုတ်ပဲ Debate လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်ကိုပဲ နှစ်ဘက် အငြင်းအခုန် ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ Debate ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲ ကိုယ်ယက်ပြောရတဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုး ဆိုတော့ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ကို ရထားတဲ့ ပညာတတ်တွေ ဆိုပေမယ့် တဖက်ပဲ တွေးတတ် မြင်တတ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပညာတတ်ဆိုသူတွေရဲ့ ဆွေးနွေးပုံ ဆွေးနွေးနည်း၊ ဆွေးနွေးရာမှာ အချက်အလက်ကို တင်ပြပုံတင်ပြနည်းကို ကြည့်ပြီး ကျောင်းသားတယောက်သာ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ အတော်ကို အံ့သြခဲ့ရဖူးလို့ ခန့်မှန်းကြည့်တာပါ။ ကျွန်မသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားက အထက်တန်း ပညာရေးမှာတောင် တက္ကသိုလ်မှာလို Tutorial discussion ဆိုတာ မရှိပေမယ့် Assignment လုပ်ရင် ဘက်ပေါင်းစုံက အကုန်ဆွေးနွေးပြီး ရေးပေးရပါတယ် ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာကိုပဲ တဖက်သတ်သွားဆွေးနွေးပြီး တင်လိုက်ရင်တော့ ၁၀ တန်းအဆင့် (မြန်မာပြည်မှာ ၈ တန်းအဆင့်) Assignment မှာတောင် အမှတ်တမှတ်မှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လိုပဲ မတူတာကို ပြောပြော သူပြောလိုက်တဲ့ အချက်ကို ကိုယ်လက်မခံနိုင်ပေမယ့် မှားတယ်လို့ မသတ်မှတ်ပဲ ကိုယ့်အတွက်မမှန်ပေမယ့် သူ့အတွက် မှန်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်က ပညာတတ်တွေ ကတော့ အခုလို တဖက်သတ်ဖြစ်ရတာ သူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူး ပညာရေးစနစ်ကြောင့် ဖြစ်ရတယ်လို့ ကျွန်မ သဘောထားပါတယ်။
ညီလေး ဂျူလိုင်ရေ.. ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်...
ကိုဂျူလိုင်ရေ... ဟုတ်ပ... တန်ရာတန်ရာ ဖြစ်နေပြီထင်တယ်ဗျာ...။ အောက်တန်းစားတွေ... အချောင်သမားတွေ... လူယုတ်မာတွေ... ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီ...။ ပညာတတ်ဆိုတဲ့ အချောင်သမားအောက်တန်းစားတွေကို ပိုရွံတယ်ဗျာ...။
strike ပြောတာမှန်တယ် (ဒီတစ်ခါပဲ strike မှန်ဖူးသေးတယ် ထင်တယ်)
မသိရင် Accept မလုပ်ပါနဲ့လား။ ဆွေးနွေးချင်ရင် mail ပို့လို့ ရတာပဲလေ။ ဒီ post ကို တင်တဲ့နေ့ကတည်းက ဖတ်ပြီးသား ခုမှ comment ရေးဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ ကရုဏာ ဒေါသောနဲ့ ပြောဖြစ်ကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ကို JD ကိုလည်း အကြံပေးတာပါ။ မသိဘဲနဲ့ accept လုပ်ရင်တော့ ရွှေနိုင်ငံက ဒါမျိုးတွေ နောက်ထပ် အကြောင်ပေါင်းတထိန် (အကြိမ်ပေါင်းတထောင်) မကြုံရဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးနော်။
သူများနိုင်ငံမှာ အဲဒီလို မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေနဲ့ စိတ်ညစ်ရတာ မတန်ပါဘူးလေ။ ကိုယ့်ဘက်ကသာ ၀င်မလာနိုင်အောင် တားပါ။ အရေးကြီးရင် အကျိုးအကြောင်း မေးလ် ပို့ပါစေပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ လာခဲ့တဲ့ ဘ၀အစတွေ ကွာနိုင်သလို အမြင်တွေလည်း ကွာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကေ့စ်တွေမှာ Mail က အချိန်တိုင်း အဆင်မပြေပါဘူး။ မသိတိုင်း လက်မခံပဲ ပယ်ချရမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နစ်နာစရာတွေ ရှိနေပါတယ်။
တိန့်ရှောင်ဖိန် ပြောသလိုပေါ့။ ပြတင်းပေါက် ဖွင့်ထားရင် လေပြည်လေညင်းတွေ ၀င်လာသလို ဖုန်တွေ အမှိုက်သရိုက်တွေလည်း ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါကို ကျွန်တော် လက်ခံ နားလည်မိပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ပြတင်းပေါက် ပိတ်ထားဖို့ အဆင်မပြေဘူး ထင်လို့ ပြတင်းပေါက် ဖွင့်ထားပါတယ်။
အဲဒါဆိုလည်းဗျာ... ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစား မနေပါနဲ့လို့ ပြောချင် ပြောကြအုံးမှာ မြင်ယောင်မိတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ စက်ရုပ် မဟုတ်ပါ။ ခံစားချက်ရှိတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပါ။
ဒါကြောင့် ခံစားတယ်။ ရင်ဖွင့်တယ်။ ပေါက်ကွဲတယ်။ ကြည်နူးတယ်။ ဝေမျှတယ်။ ဆဲဆိုတယ်။ ဝေဖန်တယ်။
ဝေဖန် အကြံပြုမှုတွေကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ယောင်လို့တောင် ဂတုံး မတုံးမိစေနဲ့ပေါ့ကွာ။ အဟက်...
ဂတုံးနဲ့ တွေ့လို့ကတော့ လုံးဝ အလွတ်ပေးမယ် မထင်ထားနဲ့။ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန် ကြုံဆုံလို့ကတော့ အပီအပြင်... ထိုင်ပွတ်ပစ်မယ် မှတ်...
(ကြောက်နေပြီလား Strike) ငှဲငှဲ...
ဘုရား ဘုရား.. မတွေးရဲစရာပါလား အကိုရယ်.. ဆိုးတယ်.. ဘာညာတင်ထားတဲ့ ပိုစ့်လိုပဲ.. google မှာ ရှာရင် အရှာအများဆုံးက အော်တိုတွေ တက်လာတာလေ.. ဘာညာ့ ဘလောဂ့်ကိုသာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ အကိုရယ်
Pinkgold ဂတုံး တုံးမိရင်JD ကိုရှောင်နော်၊နောက်တော့မှ မတွေးရဲစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီမလုပ်နဲ့(တသက်လုံးမယ်သီလရင်
Most Myanmar talk shit about others only.They don't know that they are also same.If you dare enough come back and support for community,correct some young people,teach them how to live in their life etc.I mean something good for own people,do not write bad about your brothers ans sisters.
ကို JD ရေ
မတောင်းဘဲ အကြံပေးပါရစေဦး။ မေးပို့ပါစေ ဆိုတာ အရင်ဆုံး အကျိုးအကြောင်း အရင် ပို့ပါစေ လို့ ပြောတာပါ။ ပြီးမှ talk ချင်သပဆို ဆက် talk ကြပေါ့။ ဘယ်သူ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာ သိပြီးပြီကိုး။ မေးက တချိန်လုံး အဆင်မပြေတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာ ပြောချင်ဆိုချင်တဲ့သူကို မေးက အရင်ပြောပါစေပေါ့။ နောက်မှ သူ့ကို talk မှာ permit ပေးလိုက်ရင် ပို ရှင်းလင်း သွားမလားလို့ပါ။
စိတ်အနှောက်အယှက် ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြုံစေချင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ဒီ post နေရာမှာ တခြား post တခု ဆုံးရှုံးသွားတယ် လို့လဲ ခံစားမိလို့ပါ။
Sorry for ur time!
ခုမှ အားလို့ အေးဆေး စာလာဖတ် သွားပါတယ်။ စိတ်မကောင်း စရာတွေပဲ။ အဆင်ပြေ ပါစေ။